MUQDISHO: Taliye Ciidan oo dil ka bad-baaday | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO: Taliye Ciidan oo dil ka bad-baaday
Farxaan Qoroolle oo madax u ah Ciidanka Turkiga uu tababaray ee Haramcad ayaa lagu weeraray wadada Via Liberia ee degmada Waaberi, waxaana goobta ka dhacay iska hor-imaad daqiiqado socday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Goobjooge ayaa sheegay in isku dhac uu ku dhexmaray degmada Waaberi aagga Via Liberia ciidan uu watay taliyaha booliska sida gaarka u tababaran, ee Haramcad Faarax Qaroolle iyo dabley hubeysan.
Inta la xaqiijiyay laba qof oo midi askari yahay ayaa ku dhaawacantay dhacdadan, oo la sheegay inay ahayd isku day dil oo la doonayay in lagu qaarijiyay Faarax Qaroolle, oo horey Al-Shabaab uga tirsanaan jiray, balse hadda hogaamiye Ciidanka Haramcad.
Warar ayaa sheegaya in Taliyaha ay gurigiisa ku weerareen Ciidan katirsan Asluubta.
Dhanka kale, Isgooyska Dabka ayaa caawa fiidkii lasoo dhigay Gaari noociisa yahay Fielder oo looga shakiyay in lagu soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana la wareegay Ciidanka amniga DF.
0 Comments Topics: elite hotel muqdisho qarax
Qaraxyo ku jira Gudaha Muqdisho
Warar 30 November 2021 17:48